I-Digital Marketing Roadmap yango-2014
Imephu yakho Yomgwaqo Wedijithali Yonyaka Ka-2014
NgoMsombuluko, Julayi 28, 2014 NgoLwesihlanu, Septhemba 26, 2014 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi kulula ukulandela umugqa onamachashazi njengoba ufuna ukuqinisekisa ukuthi ukumaketha kwakho kwedijithali kulinganisiwe futhi kuphelele. Lokhu infographic, izincomo ze Imilenze emibili, ihlose ukwenza lokho nje. Ukuhamba nge imephu yomgwaqo wokumaketha yobukhona bakho bewebhu, amaselula, i-ecommerce, okuphumayo, okungenayo, okuqukethwe kanye nezinhlelo zokumaketha ezokuxhum.
Into eyodwa elahlekile kule infographic yikhono lawo wonke amasu okusebenza ndawonye. Isibonelo, usebenzisa ukumaketha kwakho kokuqukethwe ukunika amandla izincwadi zezindaba ezenzelwe amadivayisi eselula. Lokho akuchazwa kule infographic kepha kuyisidingo esiphelele uma ungathanda ukusebenzisa ngokugcwele i-imeyili futhi uqinisekise ukuthi ama-imeyili akho afundwa kahle. Ngike ngabhala ngaphambilini ukuthi okwanamuhla umxhumanisi wezokuxhumana kwidijithali ungomunye wabaqhubi, kulinganisa inani lecebo ngalinye lokwenza umculo omnandi, omnandi!
Kaningi kunalokho, sithola ukuthi ukhiye wokumaketha kahle awenzi yonke into… kulinganisa inhlanganisela yamasu, ukukhulisa umthelela ngokwenza ukuthi basebenze ndawonye, ​​nokuqonda ukuthi lingakanani isu ngalinye okufanele liqale ukuze kukhuliswe imiphumela. Lokho kusho - lolu kuseluhlu olukhulu lokuhlola olungehla futhi uqinisekise ukuthi awulahlekelwa lutho! Le infographic iphinde inikeze izibalo ezithile ngemuva kwe- ukuthambekela kwedijithali.
Imephu Yomgwaqo Wedijithali ka-2014
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweezokuhweba ngekhompyuthangaphakathiimephu yomgwaqo wokumakethaUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukuphumasocial mediaezimbili Legitubukhona bewebhu
Ijoka Lomvuzo: Khuthaza Ukubuyekezwa Kwakho neZwi Lokumaketha Ngomlomo